दाजुबहिनीले गरे धुमधाम संग बिहे,सुन्दा अचम्म लाग्ने तर सत्य
एउटा अनौठो र अप्रत्यासित घटनामा उत्तर प्रदेशका एक व्यक्तिले आफ्नै बहिनीसँग विवाह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रमबाट पैसासहित अन्य सुविधा पाउन फिरोजबादका एक व्यक्तिले बहिनीसँग विवाह गरेको खुलासा भएको हाे।
सामाजिक कल्याण विभागअन्तर्गत सामूहिक विवाह गर्ने हरेक जोडीलाई राज्य सरकारले ३५ हजार रकम र घरपरिवारका अन्य उपहार प्रदान गर्छ। कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले २० हजार भारु बेहुलाको बैंक अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ र १० हजार भारुबराबरको उपहार दिइन्छ।
सो विवाह ११ डिसेम्बरमा फिरोजबादको टुंड्ला गाउँमा भएको थियो। केही दिनपछि गाउँलेले विवाह गर्ने जोडी सहोदर दाजु र बहिनी भएको पत्ता लगाएका थिए।
एउटा सरकारी कार्यलयको परिसरमा आयोजना गरिएको सो विवाहमा ५१ जोडी बन्धनमा बाँधिएका थिए। गैरकानुनी ढंगले अनुचित लाभ लिने उदेश्यले विवाह गर्ने जोडीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यसैबीच बेहुला बन्ने व्यक्तिको आधार कार्डबारे छानविन सुरु भएको छ।
एउटै खरबुजाको मूल्य १५ लाख येन !
विश्वकै होचा तन्नेरी बने सिन्धुलीका डोरबहादुर
४० वर्षदेखि पालेको टुप्पी चोरले काटेको भन्दै मनोज शर्माले दिए प्रहरीमा उजुरी
नेपालमै बन्छ रु. ३० लाख पर्ने विश्वको चर्चित र महँगो घडी, नेपालमा खोलेको कारखाना विश्वमै पहिलो !
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै, आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने